Isticmaalka Menu Hoos-u-dhaca Maamulka Bogga Saamaynta Xun ma leeyahay? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Isticmaalka Menu Hoos-u-dhaca Mamulka Bogga Saamaynta Xun?
Isticmaalka Menu Hoos-u-dhaca Mamulka Bogga Saamaynta Xun?
Weydii su'aasha SEO ee maanta waxay ka timid Joe ee Croatia. Midkani wuxuu la tacaalayaa arrin aan hubo in xirfadle kasta oo SEO ah uu arkay - ama arki doona mar ka mid ah xirfaddooda.
"Waxaan qabaa su'aal ku saabsan hoos-u-dhigga liiska/saamaynta xiriirinta qarsoon ee awoodda boggaga.
Haddaba, boggayaga shabakadu wuxuu ku saabsan yahay xogta ciyaaraha iyo tirakoobka, halkaas oo boggayaga guriga aan ku muujinno ciyaaro kala duwan oo isboorti oo laga ciyaaro dalal kala duwan. Waayo-aragnimada isticmaalaha iyo qaybta farsamada ee bogga, ciyaarahaas waxa lagu ridi doonaa liiska hoos u dhaca ee waddan kasta. Haddii liiska waddanka aan la gujin, kulammadaas labadaba lama arki karo isticmaalayaasha iyo Google. Taasi saamayn taban miyay ku yeelan doontaa boggaga ciyaarta ee khuseeya maamulka waxayna saamaynaysaa gurguurashada?
Navigation iyo menus waa aag weyn halkaas oo faa'iidooyinka SEO ay hagaajin karaan boggooda ama ay waxyeello ka badan u geysan karaan wanaagga.
Waa maxay sababta Menus Navigational Matter ee SEO
Fikrado badan ayaa gala menu-yada, maahan kaliya dhinaca SEO laakiin laga soo bilaabo UX, hal-abuurka, helitaanka, iyo muraayadaha horumarinta, sidoo kale.
Marka la eego shuruudaha SEO ee farsamada, navigation waa fursadaada ugu fiican ee aad saameyn ku yeelan karto PageRank ee bogaggaaga gudaha.
Waa meesha aad ka xakameyn karto isku xirka iyo sida maamul kasta (dhammaanteen ma joojin karnaa in la yiraahdo "jusiirka isku xirka"?) Ku qulqula dhammaan boggaaga.
Menu-yada hagaha waxa kale oo ay caawiyaan makiinadaha raadinta inay fahmaan sida goobtaada loo dhigay.
Inta badan waxaa la i weydiiyaa, "Haddii xiriirku uu ku yaallo khariidadda goobta, ma waxaan uga baahanahay liiska hagaha ugu weyn, sidoo kale?"
Jawaabtu waa haa, waad sameyneysaa!
Haddii xiriirku aanu ahayn mid muhiim ah oo kugu filan inaad geliso marinkaaga oo aad tusiso isticmaaleyaasha, maxay makiinadaha raadinta u malaynayaan inay muhiim u tahay inay tusaan isticmaalayaasha?
Haddaba aan ku soo laabano su'aashii Joe: Ma jirtaa saamayn taban oo maamulka boggaga ku jira liiskaaga hoos u dhaca?
Waxay ku xiran tahay!
Iyada oo ku xidhan sida liiskaaga loo sumadeeyay, kuwa sare iyo kuwa jaamacadeed ee isku xidha waxaa laga yaabaa Aan u muuqan matoorada raadinta. Taasi saameyn xun kuma yeelan doonto bogaggaas, laakiin sidoo kale kuma habboona marka la eego hagaajintooda guud.
Waxa kale oo laga yaabaa inay saameyn ku yeelato gurguurashada.
Xirfadlayaal badan oo SEO ah ayaa aamminsan in Google-gu gurguurto boggaga ku salaysan PageRank sidaa darteed xiriirin badan oo gudaha ah ee bogga waxay kordhiyaan fursadda in la ogaado oo la gurguurto, iyo sidoo kale PageRank!
Inkastoo aanan rumaysnayn fikradda sawir-qaadista PageRank, waxaa muhiim ah in aad ka fikirto nav-gaaga marka laga eego dhinaca garaafka isku xirka.
Xasuusta dhinaca: Dhowr sano ka hor shir, Dixon Jones wuxuu sameeyay hadal weyn oo ku saabsan sida CNN ay u beddeshay navigation-kooda agagaarka u saameeyay PageRank ee boggaga dhowr xiriir oo iyaga ka fog sababtoo ah waxay bedeshay garaafkooda gudaha si aad u badan. Ma heli karo bandhiggaas internetka, laakiin halkan waa barta blog oo ka hadlaysa aragtida.
Tixgelinta Muhiimka ah ee Hoggaanka Hagaha
Marka la naqshadeynayo kala sareynta nagivational, waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo socodka isticmaalaha iyo boggaga muhiimka ah.
Ma aha in bog kastaa ku jiro liiska. Si kastaba ha ahaatee, waa in ay jirtaa waddo gurguurasho oo cad oo ka socota bogga guriga ilaa dhammaan boggaga kale ee goobta - mid aan ku lug lahayn khariidadda goobta.
Waxaad ogaan doontaa qaar badan oo ka mid ah goobaha tafaariiqda ee ugu sarreeya inay leeyihiin hal menu oo heer sare ah oo ku yaal boggooda hore, laakiin ka dibna ku dar liiska sare oo leh xidhiidhyo badan oo khuseeya qaybtaas boggaga qaybta ama bogga hoose.
Waxay doorteen inay “awooddooda” ku qulqulaan bogag-hoosaadkaas, ka dibna u oggolaadaan bogaggaas inay ku xidhaan wax kasta oo kale. Tani maaha xeelad xun waana mid aan hore u isticmaalay.
Had iyo jeer samee garaaf isku xirka gudaha si aad u hubiso inaad runtii direyso calaamadaha aad rabto inaad dirto.
Waxaad si fudud u samayn kartaa tan adigoo isticmaalaya aaladaha ay ka midka yihiin Crying Frog, Sitebulb, Majestic, PowerMapper, ama xataa adiga keligaa adigoo isticmaalaya Gephi iyo liiska isku xidhka gudaha.
Sidoo kale, iska hubi in hagitaanku aanu ku dhammaanin inta badan waxa ku jira bogga.
Matoorada raadinta ayaa runtii si fiican u go'aaminaya waxa ku jira qaybaha bogga, laakiin wali waxaan arkaa goobo badan oo leh navigation oo aad u weyn oo xisaabiya ilaa 90% nuxurka bogga.
Taasi maaha mid ku habboon waxayna noqon kartaa jahawareer matoorada raadinta (iyo dadka).
Si aad wax badan uga barato dhaqamada ugu wanaagsan ee navigation, ka eeg Sida loo Hagaajiyo Navigation kaaga: 7 Dhaqamada ugu Fiican ee Aasaasiga ah.
Xiritaanka, jawaabta su'aasha Joe waa inay ka duwan tahay goob kasta. Waxaan rajeynayaa in jawaabtayda ay ku siiso waxyaabo aad ka fikirto iyo agab si ay kaaga caawiyaan go'aaminta habka ugu wanaagsan ee aad ugu gudbi karto xaaladaada gaarka ah.
10 Siyood oo Dhismaha Mareegtu Saamayn Ku Yeelan Karto SEO
Sida Matoorada Raadinta u gurguuran karaan & Tusaha: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
SEO Farsamo Sare: Hage Dhamaystiran
Sida loo Hagaajiyo 16 Arrimaha Sawirka Guud ee WordPress
Xayeysiisyada Google-ka Waxqabadka Ugu Sarreysa ee Cusbooneysii, Isbarbardhigga Macmiilka, Quudinta Alaabta, Wax ka badan